01. ပစ္စည်းဝယ်ယူခွင့်လွှာ(purchase order)ထဲတွင်အမည်၊မိသားစုအမည်၊အသင်းဝင်နံပါတ်များဖြည့်ပါ။
02. ဝယ်ယူခွင့်လွှာအမျိုးမစားကိုရွေးချယ်ပါ၊ (ရာထူးပြုလုပ်ခြင်း/အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်း/Aistockဖွင့်သို့မဟုတ်ဖြည့်ခြင်း။)
07. သင်သည်ဝဘ်ဆိုဒ်မှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သောပစ္စည်းဝယ်ယူစနစ်၏စီးပွားရေးအမှတ်(PV) ၏မှန်ကန်မှုကိုဝယ်ယူတိုင်းစစ်ဆေးကြည့်ရမည်။
အိုင်ယာနာစီးပွားရေးအသင်းဝင်များ (FR.002) အော်ဒါပုံစံနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ငွေလွှဲပြောင်းလွှာကိုဖက်စ်(သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်နံနက်၉.၃၀နာရီမှ၁၉.၀၀နာရီအထိကုန်ပစ္စည်းများကိုနေ့တိုင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းအော်ဒါမှာယူရာတွင်ကောင်တာရှေ့ဝန်ထမ်းအားဖုန်းခေါ်၍ကုန်ပစ္စည်းမှာယူကြောင်းအမြဲအတည်ပြုရမည်။
– အွန်လိုင်းမှအော်ဒါမှာယူခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသည်အသင်းဝင်အဖြစ်လျှောလွှာမှတ်ပုံတင်ပြီးသောသူများသာပြုလုပ်နိုင်သည်၊အကယ်၍အသင်းဝင်အဖြစ်မလျှောက်ရသေးလျှင်အိုင်ယာနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (သို့)အွန်လိုင်းစနစ်မှတဆင့်လျှောက်နိုင်သည်၊(အိုင်ယာနာစီးပွားရေးလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာဖြည့်ပုံစံကိုလေ့လာနိုင်သည်၊
– အကယ်၍သင်သည်အသင်းဝင်(မန်ဘာ)စနစ်ဝဘ်ဆိုဒ်www.aiyara.co.thတွင်အသင်းဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဝင်နေပြီးဖြစ်လျှင်နောက်အချက်သို့ကျော်၍ချက်ချင်းဖတ်ကြည့်နိုင်သည်၊အသင်းဝင်စနစ်ဝဘ်ဆိုဒ်မဝင်ရသေးလျှင်အသင်းဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရအရင်ဝင်ရန်www.aiyara.co.th ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ပြီး၊“မန်ဘာစနစ်ဝင်ရန်”ဟူသောစာတန်းကိုရှာပါ၊ပြီးလျှင်မန်ဘာနံပါတ်နှင့်စကားဝှက်ကိုဖြည့်ပြီးဝင်ပါ။